– अर्जुन पीयूष 13 अगस्त, 2019 को दिन एसडीएफले फेरि अर्को इतिहास कायम गरेको छ। एसडीएफका जम्मा 10 जना विधायकहरूले दिल्लीमा भाजपाका राष्ट्रिय महामन्त्री राम माधवको नेतृत्वमा आफूहरूलाई भाजपा सामेल गरेको घोषणा हुनसाथै सोसियल......
काठमाडौं, साउन २९ । सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा (एसडीएफ) का १० जना विधायक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मा प्रवेश गरेका छन । मंगलबार सिक्किमको सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा दलका दश विधायक नयाँ......
नयाँ दिल्ली, साउन २६ । काँग्रेस आई केन्द्रीय कार्यासमितिको बैठकले राहुलकी आमा पूर्व अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई अन्तरिम अध्यक्षमा चयन गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । राहुलको राजीनामापछि नेहरु गान्धी परिवार बाहिरबाट अध्यक्ष बनाइने......
काठमाडौंं, साउन २४ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जम्मू कश्मिर पुनर्गठनको सम्बन्धमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । मोदीले भारतीय संविधानको धारा ३७० लाई हटाउँदै जम्मू कश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जाबाट हटाउनुको कारणबारे स्पष्ट गर्न......
सिक्किम, गान्तोक5अक्टोबर, 1940-मा मालबाँसे, सोरेङ, पश्‍चिम सिक्किममा जन्मिएका नरबहादुर भण्डारी बितेको दुईवर्ष भइसक्यो । सिक्किमको राजनीतिमा एउटा अलग्गै शिखर बनेका उनलाई आधुनिक सिक्किमका अभियन्ताको उपाधिले पनि चिन्ने गरेको छ सिक्किमले। पहिलोपल्ट 18......
– अर्जुन पीयूष सिक्किम, गान्तोक तारिक2अगस्त, 2019 को दिन राज्यका मुख्यमन्त्री पी. एस. तामाङ (गोले)-को कार्यालय (सम्मान भवन) मा मुख्यमन्त्रीका प्रेस एवं मीडिया सल्लाहकार सी. पी. शर्माको मुख्य आतिथ्यमा राज्यका सम्पूर्ण प्रेस......
गान्तोक, अगस्त २ । सिक्किम गजल मञ्चको एक समन्वय सभा नेपाली साहित्य परिषदको सम्मेलन कक्षमा सम्पन्न भएको छ । यो सभा सिक्किम गजल मञ्चकी अध्यक्ष जीविका खतिवडाको अध्यक्षतामा भएको थियो भने सभामा सिक्किम गजल......
अर्जुन पियुष गान्तोक, सिक्किम । साउन १५ । विगत वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि टाशी नामग्याल अकादमी अधीनस्थ कोपिला परिवारद्वारा ३० जुलाई, को दिन भव्य रूपमा २०५ औं भानु जयन्तीप्रति आफूलाई समर्पित गर्दै ३५औं......
एजेन्सी, असार २० । भारतमा शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा बजेट प्रस्तुत भएको छ । हालै चुनाव जितेर दोस्रो कार्यकाल सम्हालेको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको यो पहिलो बजेट हो । भारतकी प्रथम महिला......
काठमाडौं, जेठ १० । भारतमा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी फेरि सत्तामा आएको छ । १७ औं लोकसभा निर्वाचनको बिहीबार भएको मतगणनामा भारतीय जनता पार्टी र उसको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए)ले स्पष्ट......